Ụdị nke pensụl
Enweghị uwe ejiji ejiji ga-eme ka nwanyị mara mma karịa uwe mwụda. Ọ bụ ụdị uwe a nke na-ekpuchi ihe mgbagwoju anya nke na-emesi ịdị mma nke ọnụ ọgụgụ ahụ ike. Taa, o siri ike iche n'echiche nke oge mgbe ụmụ nwanyị na-enweghị uwe a, n'ihi na kemgbe ọtụtụ narị afọ, uwe ejiji ndị inyom bụ ejiji.
N'ụlọ agha nke ụmụ nwanyị nke oge a, e nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche nke ihe a nke uwe. Otú ọ dị, nhọrọ kachasị mkpa maka ọtụtụ iri afọ n'ahịrị bụ uwe mpempe akwụkwọ nke na-abanye uwe ụmụ nwanyị na 40 nke narị afọ gara aga site n'aka aka nke French couturier Christian Dior.
Uwe uhie uhie dị ka isi ihe nke uwe akwa
N'ihi mgbalị nke ndị na-emepụta ndị a ma ama na mkpofu ụmụ nwanyị nke ejiji pụtara ọtụtụ ụdị dị iche iche nke skirts-pensụl. Nkọwa nke oge a bụ ihe ndabere nke uwe ejiji ụmụ nwanyị. Ụdị dị iche iche dị iche iche, nke sitere na ụdị ákwà dịgasị iche iche, nọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nchịkọta ọ bụla ọ bụla n'agbanyeghị oge.
Ngwunye nke ejiji akwa pensụl bụ na nwanyị nke ọ bụla ọ bụla nwere ike ịhọrọ ụdị onwe ya. Ụdị a kpụkọrọ akpụkọ na mkpịsị ụkwụ ga-enyere anya na-eleta otu nwanyị dị ala, pensụl pensụl na basque ga-adọrọ uche gaa n'úkwù, ụdị dị iche iche nke waistline ga-eme ka njirimara nke onye nwe ya pụta ìhè, na nkedo pensụl na akpa ga-enye onyinyo ahụ ka ọ bụrụ ihe ngosi nke onye kwuo uche ya. obere thighs.
Uwe akwa pensụl
Uwe ndị dị otú ahụ dị oke mma na nzukọ azụmahịa, ụbọchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nnọkọ oriri na ọṅụṅụ na ọbụna nnyefe ọrụ. Ụlọ ụlọ ejiji na-enye ụdị nsụgharị dịgasị iche nke ụdị a, nke nwere ike ịghọ ihe ndabere nke oyiyi ọ bụla.
Otu uwe mpempe akwụkwọ jupụtara na ya bụ ihe dị egwu nke oge a. Ụdị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ma openwork na ezigbo, na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị ebipụ, ma nwekwara ihe dị iche iche achọ mma. Enweghi ugwo iru uzo di nma, nke na-enye gi ohere imeputa otutu onu ogugu di nma. Maka uwe a na-eyi kwa ụbọchị, enweghi ike iji pensụl jeans nwere ike ime. Nhọrọ nke ikpeazụ ahụ, nke nwere zippers, bọtịnụ ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ ga-enyere aka ịmepụta ihe ọ bụla na-adị kwa ụbọchị na ụdị ejiji. Nchọpụta mbụ nke ndị na-emepụta ihe bụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ. Nke a dị iche iche nke akpụkpọ anụ na-akpụ akpụ, nke a na-eji akpụkpọ anụ, nke a na-achọpụta ma ọ bụ nke na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mfe nwere ike ijikọta ya na uwe elu na-acha ọcha nke ụdị nwoke, obere jaket ma ọ bụ eriri akpa.
Ejiji na-agbanwe agbanwe, ma usoro ndị dị adị na-adịgide. Dịka ọmụmaatụ, akwa uwe ojii ma ọ bụ uwe nkedo bụ ihe nlereanya nke ejiji na mgbe niile.
Uwe na eriri
Ihe kacha mkpa oyi azụ n'oge oyi - atụmatụ stylists
Akpụkpọ ụkwụ na-acha rọba
Ụkwụ akpụ ụkwụ n'ekwughị ụkwụ
Egwuregwu uwe oyi maka ụmụ nwanyị
Oge mgbụsị akwụkwọ-Mmiri mmiri
Umunwanyi - Owu
Uwe maka ifufe
Ịzụ ahịa na Cologne
Okpokoro oge okpukpu oge
Ụlọ nke Ịdị n'Otu (Daugavpils)
Kedu ihe ị ga-eji ejiji pink?
Anaplasmosis na nkịta
Gates na-eto eto
Ịchọ na kọfị
Isi na uwe
Photoshoot na ahihia
Drakensberg Ugwu (Lesotho)
Hyde Park na London
Ịkwụsị nke nrite n'ụlọ akwụkwọ
Echiche nke ígwè na-anọchite anya okooko osisi
Uwe ejiji nke nwanyi 2014
Kedu otu esi ahọrọ ntụpọ maka paquet?
Akọrọ na nkịta - ọgwụgwọ n'ụlọ
Playa Arenal osimiri
Satzeli maka oyi